Njani kwaye xa Ubunzima buzama umsebenzi
Isivivinyo soKukhulelwa kweZithuba zobuxoki kunye neziNtle
Izilingo zokukhulelwa zixhomekeka kubakho be-hormone ye-chorionic gonadotropin (hCG), i-glycoprotein efihliwe yi-placenta kungekudala emva kokuchumisa.
I-placenta iqala ukukhula emva kokufakelwa kwamaqanda okuchumayo kwisisu somfazi, okwenzeka emva kweentsuku ezintandathu emva kokukhulelwa, ngoko ke okokuqala iimvavanyo zingasetyenziselwa ukufumana ukukhulelwa ziintsuku ezintandathu emva kokukhulelwa. Ukufakela umquba akukwenzeki ukuba kube yinto efanayo nangomhla wokulala, ngoko ke abaninzi abantu bafazi bayacetyiswa ukuba balinde baze balahlekelwe ixesha labo ngaphambi kokuzama ukuvavanya ukukhulelwa.
amazinga e-hCG aphindwe kabini malunga neentsuku ezimbini kwindoda ekhulelwe, ngoko uvavanyo luyanda ngokunyaniseka kwithuba
Iimvavanyo zisebenza ngokubopha iHHM hormone, ukusuka kwigazi okanye umchamo ukuya kwi-antibody kunye nesalathisi. I- antibody izakubopha kuphela kwi-hCG; amanye ama-hormone akayi kunika umphumo wokuvavanya. Isalathisi esiqhelekileyo yimileksi ye-pigment, ekhoyo kumgca wovavanyo lokuvuthwa kwe-urine ekhaya. Iimvavanyo ezibucayi kakhulu zingasebenzisa i- fluorescent okanye i-molecule echanekileyo edibanisa no-antibody, kodwa ezi ndlela azidingekile ukuhlolwa kwe-over-counter-test diagnostic. Iimvavanyo ezifumaneka ngaphaya kwe-counter-against kunye nalabo bafunyenweyo kwiofisi yegqirha banye. Ukwahlula okuphambili yithuba lokunciphisa impazamo yomsebenzisi ngumcuphi oqeqeshiwe. Iimvavanyo zegazi ziyakhathazeka ngokufanayo nangaliphi na ixesha. Uvavanyo lwee-Urine lubonakala lunobunzima kakhulu ngokusebenzisa umchamo ukusasa ekuseni, okulindeleke ukuba lujoliswe ngakumbi (luya kuba namazinga aphezulu e-hCG).
Iimpawu ezingamanga kunye neziNtle
Uninzi lwamachiza, kuquka iipilisi zolawulo lokuzalwa kunye neyeza-antibiotics, azichaphazeli iziphumo zokuvavanya. Utywala kunye neziyobisi ezingekho mthethweni azichaphazeli iziphumo zovavanyo. Izidakamizwa kuphela ezinokubangela ukuba uxoke ngamanga abo baqulethe i-hormone ye-HCG yokukhulelwa kubo (ngokuqhelekileyo kusetyenziselwa ukunyanga ukungabikho kwengqondo).
Ezinye izicubu kumfazi ongeyena okhulelweyo zingenza i-hCG, kodwa amanqanaba ngokuqhelekileyo aphantsi kakhulu ukuba abekho kwibala leemvavanyo.
Kwakhona, malunga nesiqingatha sazo zonke iimbono aziqhubeki ekukhulelweni, ngoko kuya kuba ne-positi 'yeemeko' zokukhulelwa ezingayi kuqhubeka.
Ngezinye iimvavanyo zomchamo, ukukhuphuka kungenza umgca onokuthi uguqulelwe ngokuthi 'ulungile'. Yingakho iimvavanyo zinomda wexesha apho kufuneka uhlolisise iziphumo. Akuyinyaniso ukuba umchamo ovela kumntu uya kunika umphumo wokuvavanya.
Nangona izinga le-hCG liphakama ngaphezu kwexesha lomfazi okhulelweyo, ubuninzi be-hCG eveliswa kumfazi omnye uhlukile kwixabiso eliveliswe kwelinye. Oku kuthetha ukuba abanye besetyhini abanako ukufumana i-hCG ngokwaneleyo kumchamo okanye igazi kwiintsuku ezintandathu emva kokukhulelwa ukuze kubone umphumo wokuvavanya. Zonke iimvavanyo kwiimarike kufuneka zibe neengqiqo ngokwaneleyo ukuba zinike umphumo ochanekileyo (~ 97-99%) ngelixa umfazi ephule ixesha lakhe.
Yintoni i-PBT Plastics?
Ngaba ukuvutha kwi-Food Hot kuyenze Yenze Ipholile?
Uluhlu lwezinto ezikhanya ebumnyameni
Indlela yokususa i-Super Glue
Imbali emfutshane yeMozambique - Icandelo 1
Yintoni Ingcaciso Yenzululwazi yeDinosaur?